ဆယ်ကျော်သက်က ငါ့ကို မလေးစားတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
ဆယ်ကျော်သက်က ငါ့ကို မလေးစားတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ
Alicia tomero | 05/11/2021 22:43 | အဆင့်မြှင့်တင် 07/11/2021 13:17 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သည်ကို ဦးစွာသိသည်။ ၏စင်မြင့် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်. ဒီအဆင့်ကို ဆက်မလျှောက်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအဆင့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးများအားလုံး ဤအဆင့်သို့ရောက်သောအခါ များသောအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ပါ။အချို့သောမိဘများသည် 'မင်းရဲ့ဆယ်ကျော်သက်က မင်းကိုမလေးစားတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ' ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ လုံးထွေးနေရပါတယ်။
ဖေဖေမေမေတို့က ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းတွေ အများကြီးမေးကြတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ပညာရေးက ငါတို့မှာ ပြဿနာရှိနေသလားမသိဘူး။ ခွင့်ပြုလွန်းတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေမှာ တစ်မျိုးမျိုးရှိလား။ အကျင့်မမှန်။ သံသယမရှိဘဲ၊ နောက်တစ်ခုရှေ့ရောက်လာသော မျိုးဆက်တိုင်းသည် ယခင်မျိုးဆက်ကို အမြဲဝေဖန်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ် ဆယ်ကျော်သက်များသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မလေးစားခြင်း ရှိ၊ မရှိ မကြာခဏ အခြေအတင် ဆွေးနွေးနေကြသော်လည်း မျိုးဆက်တစ်ခုစီတွင် ထိုစကားစုသည် အချိန်နှင့်အမျှ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
1 ဆယ်ကျော်သက်များ၏ အပြုအမူ၏ အကျိုးဆက်များ
2 သင့်ကလေးက သင့်ကို မလေးစားတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။
ဆယ်ကျော်သက်များ၏ အပြုအမူ၏ အကျိုးဆက်များ
ဆယ်ကျော်သက်များသည် ၎င်းတို့၏ အရာအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ခက်ခဲသော အဆင့်တစ်ခုရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သိမြင်မှုဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ. ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကို ပုံဖော်လိုကြပြီး လုံးဝလွတ်လပ်မှုဖြင့် လုပ်ချင်သည့် ခေတ်ဖြစ်သည်။ သားသမီးတွေကို မိဘတွေနဲ့ တွဲတွေ့တဲ့ နေရာတိုင်း၊ အိမ်အပြင်မှာ ခြားနားတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုကို မြင်နေရတယ်။. တခြားမိသားစုတွေမှာ သူတို့တွေ့မြင်သမျှ သူတို့အိမ်မှာ ကိုယ်စားပြုပြီး ကိုယ်စားပြုချင်ကြလိမ့်မယ်၊ အဲဒီကနေ သူတို့အမြဲသိထားသမျှကို ဝေဖန်စပြုလာကြတယ်။
ငယ်ရွယ်သူများ၏ ရှေ့မျက်နှာစာ စတင်ပြောင်းလဲ ၎င်းသည် ရင့်ကျက်မှုပြီးမြောက်သည့် နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့တွင် တစ်မျိုးမျိုးရှိသေးသည်။ ၎င်း၏ရင့်ကျက်မှုတွင်ပဋိပက္ခ။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲလေ့ရှိပြီး အများစုမှာ ၎င်းတို့၏ စိတ်ခံစားချက်ကို ပုန်ကန်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားရမှာက သင်အမြဲလုပ်နိုင်တယ်။ မိဘနှင့် သားသမီးကြား ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရောက်နိုင်သည်။. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က ဆန္ဒပြရင် သူ့စကားကို နားထောင်ပြီး ဒေါသဖြစ်ချင်ရင် သူ့မှာ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ မင်းမှာ ဒီလို သဘာဝ တုံ့ပြန်မှု မရှိဘူး၊ မထီမဲ့မြင်ပြုပြီးတော့ ရန်လိုတာ။
သင့်ကလေးက သင့်ကို မလေးစားတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။
အရေးကြီးတာက သင့်ကလေးကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ပါပဲ။ သူက သူ့လေသံကို မြှင့်ပြီး မင်းကို မလေးစားဘူး။ လောလောဆယ်မှာ အရာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်တာကြောင့် သူနဲ့ သူမကို အမှီလိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကလေးက သင့်ကို စော်ကားတာ၊ သင့်အတွက် နာကျင်စေမယ့် ဒါမှမဟုတ် ကြီးကျယ်တဲ့ ရှုတ်ချတဲ့စကားတွေ ပြောတဲ့အခါ ဒါဟာ အများကြီး ထိခိုက်စေပါတယ်။ ထိုသို့သော တုံ့ပြန်မှုမျိုး ကြုံရလျှင် တည်ငြိမ်သော ဖခင် သို့မဟုတ် မိခင်သည် အကြံအစည်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ အနည်းငယ်ငြိမ်သက်ခံစားရသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အဆက်အသွယ်အဖြစ်။ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူဟာ အသစ်အဆန်းမဟုတ်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ယူဆရမှာဖြစ်လို့ ကြိုးစားနိုင်စွမ်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အခိုက်အတန့်ကို နားလည်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ရှောင်မပြေးပါနဲ့ ဒါမှမဟုတ် မင်းကို ခြေမချပါနဲ့၊ ဘယ်သူက အခွင့်အာဏာရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ပြရမယ်။
ဒီမှာ ဆက်သွားလို့ရတယ်။ သေးငယ်သော ပြစ်ဒဏ်များကို စိုက်ထုတ်ခြင်း၊ ကလေးတစ်ယောက်မှာ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသလိုမျိုး အဖြေရှာမရရင် သူ့အလိုလို ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။ မိခင် သို့မဟုတ် ဖခင်၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် သင့်ကိုယ်သင် ရပ်တည်ပါ။ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် စည်းမျဥ်းများအားလုံးကို အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက် ချမှတ်ထားသည်ဟု ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောပါသည်။ သင့်ကလေးသည် သင့်အား အမှားလုပ်မိ၍ မထီမဲ့မြင်ပြုပါက အကျိုးဆက်များ ရှိလာမည်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းကဲ့သို့ ပြုမူခြင်းသည် ၎င်းတို့၏အကျိုးအတွက် ဖြစ်သည်။ ဒီကနေပြီးတော့ လုပ်ရမယ့်ဟာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်။ အနာဂတ်မှာ ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါစေ။
အကြီးကျယ်ဆုံးသော အခိုက်အတန့်တွင် သင့်ကလေးက သင့်ကို စော်ကားပါက အလားတူ မလုပ်ပါနှင့်။ ဆက်သွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ shock ကိုကိုယ်စားပြုဖို့ကြိုးစားပါ။ နာကျင်စေတဲ့အတွက် ဆက်ပြောနေမယ့်အစား "ဒီလိုစကားမျိုး မပြောပါနဲ့၊ ငါ့ကို မပြောပါနဲ့" ၊ ရိုင်းစိုင်းသော သို့မဟုတ် ရိုင်းစိုင်းသော စကားစုများဖြင့်
ဒါပေမယ့်လည်း မကိုင်းပါနဲ့။ သားကောင်ကိုအမြဲတမ်းကစားပြီး မင်းမကောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို သူ့ကိုမြင်စေလိုက်ပါ။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရမယ်။ သင့်သားသည် သင်အရှုံးပေးသည်ကိုမြင်လျှင် သို့မဟုတ် သင့်အား ပျော့ညံ့သည်ဟုမြင်ပါက၊ သူသည် မလေးစားမှုကို ထပ်မံပြသရန် ထိုလမ်းကြောင်းကို အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အမြဲရှောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကလေးကို နားထောင်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။အဆုံးတွင် လေးစားမှုကို အားဖြည့်ပေးမည်ဆိုပါက ၎င်းတို့သည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်း ပြုမူချင်သော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ တစ်စုံတစ်ခုက သူ့ကို ဘာကြောင့် စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တာလဲလို့ မေးနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ သူသည် သင့်စကားကို နားထောင်ပါက ထိုသို့သော ဒေါသကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းကောင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်သော ဖခင် သို့မဟုတ် မိခင်၏ လက်မှ ပိုကောင်းသည်ကို သူသိလိမ့်မည်။
ရှိရင်းစွဲဆက်သွယ်ရေးသည် အရာအားလုံးကို အခြေချရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ သင်စိတ်ဝင်စားပါက၊ ရေရှည်တွင် ၎င်းသည် သင့်အား ရှာဖွေနေလိမ့်မည်။ သည်းခံခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော့ချက်ဖြစ်သည်။ နာကျင်စရာအခိုက်အတန့်တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးသတ်ကို ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ဆယ်ကျော်သက်က ငါ့ကို မလေးစားတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ
Cellulite အမျိုးသားတွေကို ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ
၎င်းသည် အီတလီဈေး Ventis ၏ စပိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။